Dmenu iyo Rofi: 2 Barnaamijyo aad ufiican oo loogu tala galay WMs | Laga soo bilaabo Linux
Isagoo sii wata mowduuca ah Launchers Codsiga (Launchers), maanta waxaan ka hadli doonaa 2 kale oo aad loo isticmaalo, laakiin gaar ahaan Maareeyayaasha Daaqada (WMs), in ka badan gudaha Deegaanka Desktop (DEs). Kuwaas 2na waxaa loo yaqaan: Dmenu iyo Rofi.
Waxaa xusid mudan in, sida ka muuqan doonta sawirada hoose, toosan iyo fududeeyayaal sida Dmenu y Rofi sidoo kale qaarkood ayaa loo isticmaali karaa DE sida XFCE. Taas bedelkeed, taasi waa, kuwa wax sawiraya ee garaafyada iyo awoodda leh sida Albert, Kupfer, Ulancher iyo Synapse u adeegi karaan qaar ka mid ah WM kuwa jira, oo aan ogahay hubaal, tan iyo markii aan tijaabiyay dhowr launchers oo aniga qudheyda qaar WM.
Kuwa aan arkin iyo / ama akhriyin wali qoraaladeenii hore iyo kuwii ugu dambeeyay ee kusaabsanaa kuwa kale Launchers Codsiga (Launchers), waad heli kartaa iyaga, ka dib markaad akhrisid daabacaadan, adigoo gujinaya xiriiriyeyaasha soo socda ee soo socda:
Xusuusnow inay jiraan kuwa kale oo badan, Launchers firfircoon oo aan firfircooneyn, sida:
Daaqad Daaqade Avant (Awn)https://launchpad.net/awn
1 Daawadayaasha lagu taliyay ee loogu talagalay WMs: Dmenu iyo Rofi
Daawadayaasha lagu taliyay ee loogu talagalay WMs: Dmenu iyo Rofi
Iftiinkaan iyo bilawga shaqeynaya ayaa lagu sharraxay degel rasmi ah, sida soo socota:
"Liiska firfircoon ee loogu talagalay X, oo markii hore loogu talagalay dwm. Waxay u qabataa tiro badan oo ah waxyaabaha menu-ga lagu qeexay si hufan".
Sida kuwa kale launchers WMs, Dmenu sidoo kale waa mid fudud oo shaqeynaya, si heer sare ah loo waafajin karo loona habeyn karo, marka la soo koobo, waxay u furan tahay suurtagalnimada in wax laga beddelo ama lagu kabo wax lagu daro ama gacan saddexaad, iyada oo loo marayo barnaamijyada, qoraallada iyo / ama fudud amarrada amarrada gaarka ah markii loo qaabeeyey in lagu dhex bilaabo WM o DE halka lagu fulin doono.
In qaybta qoraalka qaar ka mid ah faaiidooyin aad u faa'iido badan oo xiiso leh ayaa laga soo dejisan karaa degelkeeda. Halka loogu talagalay is-beddelka horumarsan, khadadka qaar ee koodhka ayaa laga soo qaatay kuwa badan faylasha qaabeynta (dotfiles) waxaa laga heli karaa internetka, oo ay isticmaalaan dadka jecel dareenka iyo bulshooyinka barnaamijkan caanka ah.
Shakhsi ahaan, waxaan runtii jeclaa inaan ku daro Codsiga Fzf, taas oo ah ujeedka guud ee amarka ah mashiinka raadinta shucaaca. Wixii aan inta badan rakibo Dmenu oo leh Fzf hal amar oo degdeg ah, sida hoos ku qoran:
Waxaan u dhexgeliyey sida soo socota, on wm i3 adoo adeegsanaya feyl u dhigma wadada: «.config/i3/config»
Iyo adeegsiga a dejinta waxtar leh soo socda laga helo internetka:
Ugu dambeyntiina, waxaa xusid mudan in xilligan la joogo Dmenu waxay u socotaa qaabkeeda 5.0, kaas oo soo baxay dhawaan (02/09/2020), sida ku duugan kiisa goobta rasmiga ah ee barta Git. Sidaa darteed, waad soo dejisan kartaa oo isticmaali kartaa noocyadan ugu dambeeya si aad u aragto faa'iidooyinka ugu badan ee hadda jira, haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad ka isticmaasho Dmenu meelagaaga Distro.
Soo-kiciyaha soo socda ee fudud laakiin isku-dhafan ayaa lagu sharraxay isaga degel rasmi ah, sida soo socota:
"Beddel daaqad, barnaamij bilow, iyo beddelka dmenu".
Iyo asal ahaan, Rofi wuxuu kasbaday waxqabadkeeda hadda jira ama qaddarrada si fudud loo dhisay, maxaa yeelay waxay ku bilaabatay sidii mid isku mid ah Xulka wararka oo dhan, waxaa qoray Sean Pringle, ka dibna wuxuu noqday Rofi-ka hadda jira iyadoo lagu darayo tifaftiran ballaadhan oo astaamo dheeri ah, sida furaha dalabka iyo bilaashka 'ssh launcher', taas oo u oggolaanaysa inay u dhaqanto bedel ahaan Qulqulaha menu iyo / ama Dmenu.
Sidaa darteed Rofi, sidiisa oo kale Dmenu, waxaad ku siin kartaa isticmaalaha ugu dambeeya a GNU / Linux Distro, liiska qoraalka ah ee xulashooyinka mid ama ka badan laga dooran karo, iyadoon loo eegin inay amarro amarro ka yihiin fulinta dalab, xulashada daaqad ama ikhtiyaarrada ay ku bixinayaan qoraal dibadeed.
Rofi Way fududahay in la rakibo, maadaama ay ku jirto meelaha ugu badan ee keydka Qaybinta GNU / Linux. Tusaale ahaan, amarka fudud ee taliska hoose, waxaan ku rakibey gudaha MX Linux:
Websaydhkaaga rasmiga ah ee GitHub, Af-Ingiriisiga, waa mid si xog-ogaalnimo ah loo dhammaystiray, taas oo ka dhigaysa aalad si wanaagsan loo diiwaangeliyey oo fudud oo dhaqso loo isticmaali karo. Si kastaba ha noqotee, sida la socota Dmenu, waxaad ka heli kartaa internetka, qaabeynta xiisaha leh ama habaynta isticmaalka iyo muuqaalka si loo tijaabiyo. Waxaad sidoo kale booqan kartaa kuwa had iyo jeer la isku halleyn karo Arki Wiki si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Rofi.
Ugu dambeyntiina, sida aad ku arki karto 2 sawirradii hore, Dmenu iyo Rofi waa la fulin karaa, tusaale ahaan, a DE sida XFCE.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan 2 aad loogu taliyay oo horeba sifiican loogu yaqaanay barnaamijyada kufsiga ee loo yaqaan «Dmenu y Rofi», taas oo inta badan ay isticmaalaan bulshada badan ee adeegsada iyaga Maareeyayaasha Daaqadda (WMS) halka kuwa kale, sida Ulauncher, Synapse, Albert iyo Kupfer; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Dmenu iyo Rofi: 2 Barnaamijyo Wanaagsan oo WMs ah
Waxaan isticmaalaa dMenu-dheereeyey (dMenu oo dhameystiran).
Dhinaca kale, faa'iidada dMenu (iyo sidoo kale sidoo kale Rofi), oo ka duwan kuwa kale ee bilaabayaasha ah, ayaa ah inay isticmaasho kaliya kheyraadka (iyo wax aad u yar) markaad isticmaaleyso. Kuwa kale waxay cunaan ilo xitaa haddii aadan isticmaalin.
Salaan, Pedruchini. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo wax ku biirintaada. Ma aanan ogeyn Dmenu Extended, sidaas darteed waxaan uga tagayaa xiriirka bogga rasmiga ah ee kuwa xiiseynaya:
Waxaan isku dayey dhowr ka mid ah kuwa runtiina ima qanciso, had iyo jeer waxaa jira wax aan aniga igu habboonayn. Midka kaliya ee aan isticmaalo, waxaan jeclahay oo dareemayaa deg deg, raaxo leh oo aan kujirin liiskan, waa jgmenu, oo lagu daray gmrun.
Salaan, M13. Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo wax ku biirintaada. Waxaan baarayaa midkii aad noosheegtay.
Waxay soo jeedinayaan in hoos loo dhigo oo laga saaro borotokoolka Fedora SCP
LXQt 0.16 durba waa lasii daayay kuwana waa isbadaladiisa ugu muhiimsan